Inkcazo-ntetho: Amandla ePhaphalaziyo | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-25 kaFebruwari ngo-2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
U-Muhammad Yasin uphuhlise umboniso omnandi kunye nobunzulu kumandla nakwicebo lokudala, ukuhambisa kunye nokunyusa. Sithethile malunga ne-infographics Kancinci kwiMartech kwaye iarhente yethu iyaphuhlisa kwaye iyile infographics ngakumbi kunangaphambili.
Kutheni zithandwa kangaka? Isizathu esilula kukuba infographics inokudityaniswa kokubini enomtsalane, ephathekayo, kwaye yokwetyisa ngokulula. Qaphela anditshongo Echanileyo? Kungenxa yokuba andicingi ukuba injongo ye-infographics kunyanzelekile ukuba uhlale uphendula umbuzo-ngamanye amaxesha ukukhuthaza umfundi ukuba ajonge ngakumbi isihloko. Ukusuka kwimbono yeqhinga, i-infographic licebo elimangalisayo lokufumana uphando kunye nemithombo yeendaba zentlalo.
IMahammad isebenzela abathengi bethu, i-HCCMIS, inkampani ebonelela ukuhamba i-inshurensi yezonyango kwiinkampani… nditsho nezethu okoko sisebenza phesheya kolwandle nasekhaya.
tags: phuhlisa infographicsisicwangciso se-infographicsyandisa infographics
Feb 25, 2012 ngo-2: 22 PM
Enkosi ngamazwi anobubele, uDoug.
Feb 25, 2012 ngo-3: 38 PM
Yintetho emnandi u-Muhammad!